यसरी बाहिरियो दोलखाका सिडिओ रिजालको घुस काण्ड | Nagarik News - Nepal Republic Media
यसरी बाहिरियो दोलखाका सिडिओ रिजालको घुस काण्ड
दाेलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल।
२३ मंसिर २०७६ २१ मिनेट पाठ
दोलखा - २०७६ मंसिर १९ गते। सिन्धुपाल्चोकको मुडेबाट चरिकोट फर्कने तयारी थियो। टोलीमा अधिकांश पत्रकार साथीहरु थिए। केही पत्रकारहरुको मोबाइलको घण्टी बज्यो। ‘सिडिओले मुद्धाका प्रतिवादीबाट सवा लाख घुस लिएछन्, तपाइहरु कता हुनुहुन्छ, तुरुन्त पीडितहरुको सम्पर्कमा जानुस्’। फोनमा स्रोतले भन्यो।
दायर मुद्धामा मेलुङ ४ भेड्पुका लामाले छिमेकी जितबहादुर भण्डारीलाई गाली गलौज गरेको र कालिञ्चोक १ का पाख्रिन बाबु छोराले छिमेकीलाई हातपात र दुव्र्यवहार गरेको अभियोग थियो। बुधबार थुनछेक आदेशका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले लामालाई १० हजार रुपैंया धरौटी र पाख्रिनका बाबु छोरालाई ७/७ हजारका दरले १४ हजार रुपैंया धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेका थिए।
आदेश लेखे लगतै सिडिओ रिजालले सबैभन्दा पहिला अभद्र व्यवहार मुद्धाका प्रतिवादी लामाकी श्रीमती रिनुलाई कार्यकक्षमा बोलाए। ‘ल तिम्रो श्रीमानलाई जेल जानबाट जोगाइदिएको छु, एक लाख रुपैंया बोकेर धरौटी जम्मा गर्न आउनू’ सिडिओको निर्देशन सुनेपछि रिनु तनावमा परिन्। सामन्य परिवार, एक लाख रकम ठूलै थियो। पैसा कसरी जम्मा पार्नु भन्ने तनावले पिरोल्यो। अर्को मनले फेरि सोचिन् ‘बिचारा सिडिओले हाम्रो मुख हेरेर जेल जानबाट जोगाइदिएको छु भनेका छन्, श्रीमानलाई ऋणै गरेर भएनि निकाल्नुप-यो’। चरिकोटमा रहेका आफन्तसंग ऋण गरेर एक लाख रुपैंया बोकेर उनी सिडिओको कार्यकक्षमा पुगिन्।
फाँटका कर्मचारीले मुद्धाको मिसिलमा लेखिएको आदेशमा तोकिएको धरौटी वापतको १० हजार रुपैंयाको रसिद काटेर दिए। उनी छुटे। तर रिनुको मनमा चिसो पस्यो। ‘एक लाख रुपैंया लिएर सिडिओले मलाई किन १० हजारको मात्र रसिद दिए?’ अनेक अड्कल काटिन – ‘ए हैन होला सिडिओ जस्तो मान्छेले ९० हजारमा रुपैंयामा त्यसो के गर्लान र?’
पीडितहरुलाई लिएर सिडिओ कार्यकक्षमा जाँदा हक्की स्वभावका उनले विना प्रमाण मेरो बेइजेत गर्ने भन्दै मानहानीमा उनिहरुलाई थुनिदिन्छन् कि भन्ने जोखिम थियो। पत्रकारहरु मात्रै छिर्दा उनले विना प्रमाणको हो कुरा कन्भिन्स गराएर फर्काउन सक्छन भन्ने डर!
सबैले निर्णय ग-यौं, – ‘जस्तो आइलाग्छ ‘फेस’ गर्ने तर पीडित परिवारलाई लिएरै सिडिओ कार्यकक्षमा जाने’। सिडिओ रिजालले रन्किएर केही बोलिहाले सामूहिक फेस गर्ने निधोसहित हामी १० जना पत्रकार पीडितहरुलाई लिएर सिडियो कार्यालय पुग्यौं। दिउँसोको करिब ३ बजे उनको कार्यकक्ष छि-यौं। एउटा बैठक भर्खरै सकिएको थियो।
पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष जिवन लामा, म(पंतिकार), नेपाल समाचारपत्र दैनिकका चिरञ्जीवी मास्के, द हिमालयन टाइम्सका गोकर्ण भण्डारी, स्थानीय दिक्षण दैनिकका सिर्जन घिमिरे, सौर्य दैनिकका सुजन काफ्ले सिडिओको कुर्सी संगैको एउटा लहरमा बस्यौं। गोरखापत्र दैनिकका कैलाश लामा पीडितहरुसंगै पश्चिम तर्फको सोफामा बसे। नयाँ पत्रिका दैनिकका श्याम खतिवडा, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका रविन्द्र गौतम र आर्थिक दैनिकका सुवास बस्नेत दक्षिणी लहरको सोफामा बसे। हामी छिरे लगत्तै उनको हाउभाउ अस्वभाविक खालको हुन थाल्यो, अनुहार रातो पिरो देखियो।
लगतै कर्मचारीको अर्को एउटा सानो टोली कार्यकक्ष भित्र छि-यो। ‘युवा स्वरोजगारको सानो बैठक सक्नुछ सिडिओ साप, ५ मिनेट जति लाग्छ होला’ ति कर्मचारीको आग्रहमा सिडिओले ल चाडो सक्नुस भने। त्यो ५ मिनेटको बैठकमा सिडिओको ध्यान बैठक तिर थिएन खाली घुस कान्डका पीप्डित बनेका परिवारतिर मात्र प्याल्याकपुलुक हेर्थे। प्रतिवादीहरुलाई किन फेरि फर्केर तिमिहरु बाहिर निस्किऊ भनेर घोक्रे ठ्याक लगाउछन् की भन्ने डर पनि हामीमा थियो।
कहिलेकाही प्रश्न उठ्छ, पत्रकारले समाचार मात्रै लेख्ने कि जनसरोकारका विषयमा समेत बहस चलाउने? यस विषयमा मानिसहरुको दुईथरि धारणा छ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ १२:४८ सोमबार